ဘေဘီလေးက ဖျားနေတာ အအေးမိတာလား ..... တုပ်ကွေးလား .. - Hello Sayarwon
ကိုယ်တိုင် ဖျားနာမှုထက် ဘေဘီလေးတွေရဲ့ ဖျားနာမှုက မေမေတို့ကို ပိုပင်ပန်းစေသလို စိတ်လည်း ပိုပင်ပန်းပါတယ်။ အရင်ကာလတွေက ဖျားတာနာကို စိတ်ပူရပေမယ့် အခုလောက်တော့ ဒီဂရီ မမြင့်ဘူးပေါ့။ အခုကာလမှာတော့ ကိုဗစ်ကလည်း ရှိနေသလို လောလောဆယ်မှာ တုပ်ကွေးကလည်း ခပ်စိတ်စိတ် ပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ဘေဘီလေး ဖျားနာပြီဆိုရင် ဘာများဖြစ်တာလဲ ဘေဘီလေးက ဖျားနေတာ အအေးမိတာလား ….. တုပ်ကွေးလား …… ကိုဗစ်လား ……. ဆိုပြီး စိတ်တအား ပူနေမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘေဘီလေး ဖျားနာမှုဖြစ်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် ဖျားနာတာလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်စေဖို့ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေး ဖျားနာတဲ့အခါ လည်ချောင်းနာတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ အဖျားကြီးတာတွေကတော့ ခံစားရမယ့် လက္ခဏာတွေပါ။ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ခံစားရတဲ့အခါ ဘေဘီလေး ခံစားနေရတာက ကိုဗစ်များလား၊ တုပ်ကွေးလား မဟုတ်ပါစေနဲ့ သာမန် ဖျားနာမှုပဲ ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ ဆန္ဒ မေမေတိုင်းမှာ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ဒီလက္ခဏာတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ ဘေဘီလေး ဘာခံစားနေရတာလဲဆိုတာကို ပြောဖို့ ခက်ပါမယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီရောဂါတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တိုင်းက အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကို ဝင်ရောက် ကူးစက်တာကြောင့်ပါ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေက လျင်လျင်မြန်မြန် ကူးစက်နိုင်ပြီး လက္ခဏာ မြင်ရုံနဲ့ ဘာဆိုတာကို အတိအကျ ပြောဖို့ ခက်ပါမယ်။
ဘေဘီလေးက ဖျားနေတာ အအေးမိတာလား ….. တုပ်ကွေးလား …… ကိုဗစ်လား …….
ဘေဘီလေးက ဖျားနေတာ အအေးမိတာလား ….. တုပ်ကွေးလား …… ကိုဗစ်လား …….ဆိုတာကို ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
သာမန်ဖျားနာမှုကို ဖြစ်တဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေက သိပ်မပြင်းထန်ပါဘူး။ ဖျားနာမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပိုးတွေက အများကြီးပါ။ ဖျားနာမှုကြောင့် ဘေဘီလေး အနေနဲ့
နှာချေတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဖျားလည်း နည်းနည်း ရှိနိုင်ပေမယ့် အရမ်းတော့ မများပါဘူး။ ဘေဘီလေးက ပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမယ့် ထူထူထောင်ထောင်လေး ရှိပါတယ်။ အစားစားချင်စိတ် ရှိပါတယ်။ အားမရှိတာမျိုး မခံစားရပါဘူး။
ဒီလို သာမန် ဖျားနာမှုအတွက် သီးသီးသန့်သန့် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဘေဘီလေးကို အာဟာရပြည့်ဝအောင် ပြင်ဆင်ပေးမယ် ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားစေမယ်ဆိုရင်ကို အတော်လေး သက်သာလာမှာပါ။
တုပ်ကွေးကတော့ Influenza Virus လို့ခေါ်တဲ့ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ သာမန် ဖျားနာမှုထက် ပိုပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ ဘေဘီလေးမှာ
အဖျား ရုတ်တရက် တက်တာ
ကိုယ်လက်တွေ ကိုက်ခဲတာမျိုး ခံစားရနိုင်သလို
အစားစားချင်စိတ် မရှိတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် အချို့ ဘေဘီလေးတွေမှာ
ဘေဘီလေးက တုပ်ကွေး ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်သလို ကုသမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးက တုပ်ကွေးဖြစ်နေတာဆိုရင် ရေ အပါအဝင် အရည် များများ တိုက်ရပါမယ်။ သက်တောင့်သက်သာ အနားယူခိုင်း ရပါမယ်။ အဖျား ရက်တိုစေဖို့ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့ဆေး တိုက်ရပါမယ်။
၆လနဲ့ အထက်ကလေးတွေကို နှစ်စဉ် တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီး ကာကွယ်ထားတာကတော့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါ။
ကိုဗစ်ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဘေဘီလေးတွေ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ လက္ခဏာ မပြတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်သလို ခပ်ပျော့ပျော့ လက္ခဏာလေးတွေပဲ ပြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ သာမန် ဖျားနာမှုနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။
အချို့ ဘေဘီလေးတွေမှာတော့ တုပ်ကွေး ပြင်းထန်ရင် ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ တွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာက အနံ့အရသာ ပျောက်တာပါ။
တကယ်လို့ ဘေဘီလေးမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ရှိနေသလားဆိုတာကို စစ်ဆေးရပါမယ်။
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရမှုအတွက် သီးသန့် ကုထုံး မရှိတာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ရေ အပါအဝင် အရည် များများတိုက်တာ၊ သက်သောင့်သက်သာ အနားယူခိုင်းတာမျိုး လုပ်ပေးရပါမယ်။ အာဟာရပြည့်ဝအောင် သေချာလေး ကျွေးဖို့လည်း လိုပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုကို ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။
တစ်ခုရှိတာက အအေးမိ၊ တုပ်ကွေး၊ ကိုဗစ် သုံးခုလုံးက လက္ခဏာတွေက ခပ်ဆင်ဆင်လေးတွေပါ။ မေမေတို့ အနေနဲ့ လက္ခဏာကို ကြည့်ပြီး ဘာဆိုတာကို တိတိကျကျ သိနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုတိကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးပြီး ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Is ItaCold, the Flu, or COVID-19? https://kidshealth.org/en/parents/flu-vs-cold.html Accessed Date 14 October 2021
If your child has cold or flu symptoms https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/if-your-child-has-cold-or-flu-symptoms Accessed Date 14 October 2021